Sarimihetsika - Mag tsy mampino
Mag tsy mampino
Fa maninona no tsy mankany amin'ny teatira sinema intsony ny olona?
Jolay 15, 2021
Ny fandehanana any amin'ny sinema dia fotoana taloha be mpitia nandritra ny taona maro. Taranaky ny olona dia mahatadidy ny nijery sarimihetsika sasany tany amin'ny teatra sy ny zavatra niainany mahatalanjona nananan'ireny sinema ireny. Toa iray tamin'ireo fialamboly foana io…
Fitsidihana ireo toerana fanaovana sary an-tsary ny tany afovoany: The Hobbit
Jolay 7, 2021
Mbola misy roa volana aorian'izay dia manao veloma ny tany afovoany izahay miaraka amin'ny fizarana farany amin'ny trilogy The Hobbit. Amin'ny maha-horonantsary azy dimy teo aloha, The Hobbit: The Battle of the Five Armies dia nalaina sary saika manerana an'i New Zealand. Amin'izao fotoana izao,…
Inona no mahatonga ny mpilalao sarimihetsika tsara ho iray lehibe?
Rehefa miverina mijery ny sarimihetsika lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra ianao, inona no nahatonga azy ireo ho tena tsara? Mazava ho azy fa misy anton-javatra maro samihafa toy ny teti-dratsy sy ny tantara, ny naoty tsara, ny fanitsiana tsara ary ilay “Je ne sais quoi” iray manontolo…
Zaza Super: Akanjo zazalahy miady amin'ny heloka bevava
Amin'ny ankapobeny, isaky ny mandeha any amin'ny trano fisakafoanana ankohonana aho, kilalao baseball, na koa ny fivarotana enta-mavesatra, dia mahita olona kely mitafy akanjo mitafy akanjo lava aho. Ie, toa hita fa ny ankizy dia manome capes, rambo ary elatry ny angatra amin'ny ora rehetra…
Zavatra 10 Mahatalanjona anao momba ny American Pie Series
Jona 26, 2021
Tsy misy sarimihetsika hafa miaraka amin'ny Comedy, Romance, Friendship, Family Entertainment, olon-dehibe ary ny zatovo koa. Izany no antony nahombiazan'ilay sarimihetsika tamin'ny andiany rehetra ary namporisihin'ny olona tamim-pitiavana feno ity sarimihetsika ity. Ny Movie tsirairay dia samy manana ny fombany…
Zava-misy tsy azo inoana izay tsy fantatrao momba ny IRON MAN
Jona 23, 2021
Zava-misy tsy fantatrao momba ilay sarimihetsika “IRON MAN” izy ireo. Fantatrao ve fa matotra tokoa ny mpanao sarimihetsika MARVEL amin'ny fikajiana toetra manokana an'ny Super Hero's, ary koa zavatra tsara hafa amin'ny fanomezana sarimihetsika mahafinaritra. Izany no mahatonga ny sary MARVEL mitazona ny…
Jim Carrey Fampisehoana mahatsikaiky sy mahatalanjona amin'ny fotoana rehetra
Jona 20, 2021
Tsy misy azo ambara amin'ny fampisehoana hatsikana Jim Carrey; azontsika atao ihany koa ny milaza fa tsy misy mpilalao sarimihetsika hafa niaina tamin'ny anjara asan'ny hatsikana toa an'i Jim Carrey. Angamba ny vatany miovaova no nampalaza azy tany Hollywood…
Ao amin'ny Campervans ao amin'ny sarimihetsika
Campervan no tonga ao an-tsain'ny ankamaroan'ny olona tia horonantsary rehefa miresaka momba ilay sarimihetsika “Momba an'i Schmidt” izahay. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy afaka manadino ny fomba fiaina be fialonana niaina tao amin'ny campervan amin'ity sarimihetsika ity. Warren Schmidt mitondra ny Winnebago Adventurer campervan avy any Omaha mankany Denver, dia tandindona ihany koa…
Sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika mahatsikaiky an'i Hollywood
Mifangaro hafaliana daholo izany; manomboka ka hatramin'ny farany dia ho tianao ny sehatra mahafinaritra indrindra. Ahoana raha toa ka mandray anjara amin'ny filma parody ireo mpilalao sarimihetsika tianao? Ny sary an-tsaina ny kintana fotsiny dia hitondra tsiky eo amin'ny tavanao toa an'i Leslie Nielsen,…
Sarimihetsika 5 antenaina indrindra amin'ny fahavaratra 2014
Jona 15, 2021
Ankehitriny fa tonga amin'ny fomba ofisialy ny fahavaratra, fotoana izao hialana sasatra amin'ny teatra ary hijerena ireo sarimihetsika andrasana indrindra amin'ity fahavaratra ity. Ity ny dimy voalohany: 1. Manokatra i Tammy: 2 Jolay 2014 naoty: R Genre: Comedy Melissa McCarthy (Bridesmaids and The…
1 2 3 ... 6 Manaraka
Misy ireo izay mino fa nanomboka teto ny fiainana… manerana ny tany rehetra, misy foko olombelona mety ho razamben'ny Egyptianina na Toltecs na Maya. Ny sasany mino fa mety mbola misy rahalahin'olombelona izay miady ankehitriny mba ho velona any ankoatry ny lanitra.
Hetsika sy loka15
Ity hafatra diso ity dia tsy hitan'ireo mpampiasa WordPress
Hadisoana: tsy misy kaonty mifandray.
Alefaso azafady ny pejy famahan-tsakafo Instagram mampifandray kaonty.
Mandehana any amin'nyTop